I-Slope ye-Horizontal Line yiZero
Kwi-Slope of Line, ufunde ukuba umthamo, okanye m , womgca uchaza indlela ukutshintsha ngokukhawuleza okanye ngokukhawuleza kwenzeka ngayo.
ImiSebenzi engqinelanayo inezintlu ezine zeentlambo: ezilungileyo, ezinqabileyo, intlambo, kunye nomthamo ongachazwanga.
Ihlabathi Lwenene Lomzekelo Wendlela Ebizayo
Jonga kwigrafu, Umgca we-Horizontal, m = 0. I- x- axis ibonisa ixesha, ngeeyure, kunye ne- y- axis ibonisa ubude, ngeekhilomitha, ukusuka kwiDowntown Houston, eTexas.
Iqhwithi iNkosana, isiqendu sesi-5, isongela ukukhukula (phakathi kwezinye izinto) kwisixeko saseBayou ngeeyure ezingama-24. Unombono oqaqambileyo kunye kunye nezigidi ezi-2 ze-Houstoni-ukusuka eHouston ngoku. Uhlala kwi-Interstate 45 North, kwindlela eya enyakatho ukubalekela nantoni na ephosa kwiGulf of Mexico.
Phawula ukuba ixesha lihamba njani. Iyure enye idlulayo, kudlula iiyure ezimbini, kodwa usengumhilomitha omnye ukusuka kwidolophu. Khumbula, umthamo uyingcipheko yenguqu. Kwiiyure ezimbini ezidlulayo, uhambisa iiyure ezingama-zero. Ngenxa yoko, umthamo wakho u-0.
Ukubala i-Zero Slope
Jonga kwi-PDF, Bala i_Zero_Slope ukuze ufunde indlela yokusebenzisa igrafu kunye nefomula ye-slope ukubala i-slope. Ukukhuphela isofthiwe ekhululekile ukujonga i-PDF, tyelela i-https://get.adobe.com/reader/.
Udokotela uJacob Scott kunye noMqeqeshi Kaitlin Robinson: Indlela abaye badibana ngayo noMtshato